Inye mkpuchi ahụ ike: gịnị ka ọ na-ekpuchi? - AHUIKE tinye MAG - TELES Relay
Mkparịta ụka, ngwa anya, nlekọta eze ... ọtụtụ ọrụ nwere ike, n'ọnọdụ onyinye, kwere ka a kwụọ onye otu ahụ ụgwọ maka ahụike ya. Afọ, ọkwa (onye ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị), ego na ọkwa mkpuchi a họọrọ ga-enwekwa mmetụta na ụdị mkpuchi ahụ.
Kedu ihe mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi ahụ ike nwere?
Ihe mkpuchi ahụike zuru oke, nke a makwaara dị ka mkpuchi ahụike ma ọ bụ mkpuchi ahụike na-ekpuchi ihe a na-akpọ ego onye ọrụ, ya bụ ụgwọ ndị mkpuchi mkpuchi mkpuchi nchekwa. Ya mere, ọ na-agbakwunye mkpuchi mkpuchi bụ isi ma ọ bụ n'ụzọ zuru oke iji hụ na nkwa dị mma, ọkachasị ebe ụfọdụ ọrụ nwere ike ịbawanye ụgwọ ahụ ngwa ngwa.
Na mgbakwunye, ị kwesịrị ịma nke ahụ mgbe ị na-ahọrọ ahụ ike ya, echiche nke mmefu ga-adị iche dabere na profaịlụ, n'ihi na atụmanya dị iche maka onye ọ bụla. Na mkpokọta, mkpuchi mkpuchi ahụike ga-ekpuchi ụgwọ ụlọ ọgwụ, nlekọta eze na prostheses, ọgwụ / ọgwụgwọ na ngosipụta nke ọgwụ ọgwụ, nyocha na nlekọta ahụike, yana nlekọta anya na anya. Dị ukwuu nke mkpuchi ahụ ike, nkwado dị elu ga-adị elu karịa, ọ ga-abụ, dịka ọmụmaatụ, kpuchie ụgwọ gabigara ókè ma ọ bụ nlekọta pụrụ iche dịka ọgwụ ọzọ, orthodontics mgbe afọ 16 gachara ma ọ bụ ihe enyemaka. N'echiche a, ọ nwere ike ịbụ ihe amamihe iji tụnyere onyinye dị iche iche dị na ahịa ịhọrọ nkwekọrịta mkpuchi nke kachasị mma maka mkpa gị na ọnọdụ gị.
Inye mkpuchi ahụ ike maka ndị na-eto eto
N'ozuzu ha na-adịchaghị ọnụ ma na-enweghị nchebe, mkpuchi mkpuchi ahụike maka ndị na-eto eto na-agbanwe maka mkpa nke 18-25 afọ, ọnọdụ ha (ọrụ onwe ha) na karịa ihe niile, mmefu ego ha. I debanye aha maka mkpuchi ahụike zuru oke abụghị iwu, mana ọ ka na-atụ aro ka akwadoro n'oge ọ bụla. Iji mee nhọrọ ziri ezi ma kọwaa ego nkwụghachi ụgwọ kachasị mma, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iburu n'uche akụkọ ihe mere eme gbasara ahụike gị ma ọ bụ ọrịa sitere n'aka ezinụlọ iji tụlee mmefu ahụike n'ọdịnihu. Ndị na-eto eto nwekwara ike ịhọrọ ngwa anya nchịkọta ma ọ bụ eze mkpuchi bara uru karịa maka ezigbo nkwụghachi ụgwọ nke ụgwọ. N'ikpeazụ, nyere ha ego ha belata, ọ dịkwa mkpa iji tụnyere onyinye ndị dịnụ wee kọwaa mkpa ha kpọmkwem iji nweta nkwekọrịta kacha mma.
Pourquoi il ne faut pas nettoyer le four avec du vinaigre et du…
Ezinụlọ - Getty Images
Inye mkpuchi ahụ ike maka ezinụlọ
Akwadoro maka ndị nne na nna na ụmụ, ụlọ ọrụ mkpuchi ezinụlọ ga-ekpuchi mkpa nke ndị ikpeazụ, n'agbanyeghị agbanye ndụ ha. Nnukwu, ọdịnala, ngwakọta ma ọ bụ ezinụlọ naanị nne ma ọ bụ nna, onye na-ewepụta nkwekọrịta a nwere ike ịgụnye ụmụ ha yana nwunye ha. Nke a n'ozuzu na-ekpuchi ụlọ ọrụ ahụike anọ, gụnyere ụlọ ọgwụ (nhụjuanya, obstetrics, ịwa ahụ), nlekọta eze (orthodontics, prostheses or implants), ọgwụ obodo (ọgwụ, ndụmọdụ na ndị ọkachamara n'ozuzu ma ọ bụ ndị ọkachamara) na nlekọta eze. okpokolo agba na iko ma ọ bụ anya m).
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-enyekwa nlekọta ntị. Iji chọta ezigbo mmekọrịta nke na-egbo mkpa ezinụlọ niile, ya mere ọ dị mkpachọpụta ọnọdụ ahụike nke onye otu ọ bụla ịhọrọ nhọrọ zuru oke.
Inye mkpuchi ahụ ike maka ndị agadi
Maka ọnụ ahịa dị elu karịa ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ, agadi na-agbakwunye ahụ ike na-enyekwu mmesi obi ike, nyere ọnụọgụ ọgwụgwọ dị n'ọgbọ. Enwere ike ileghara ụfọdụ uru dịka nne na-eleghara nnweta ohere ilekọta anya n'ọnọdụ ọnọdụ onye otu a. Ya mere, ọ na - abụkarị na mmadụ gbanwere nkwekọrịta mkpuchi mkpuchi ya iji gbanwee ya na ọnọdụ ahụike ya.
Ọ bụrụ na mkpa dịgasị iche, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị nkwụghachi ụgwọ nke ngalaba ahụike kachasị mkpa. N'etiti ha: nlekọta ahụike, nlekọta anya, nlekọta ụlọ ọgwụ na mmefu ahụike oge niile, gụnyere ngafe ego, nyocha cancer na alo na ndi okacha amara ahu (ọkà mmụta urologist, ọkà mmụta obi, ọkà n’akwara, wdg). Treatmentsnụ ọgwụgwọ gụnyere mmezi nke ihe enyemaka nwere ike ịbụ akụkụ nke nkwa enyere. Akwụkwọ nyocha ahụike ma ọ bụ data nke ndị ọrụ mkpuchi na-enye gị ohere ịme nhọrọ kachasị mma iji nweta ọnụahịa kacha mma mgbe mmadụ chọrọ iwepụ mkpuchi mkpuchi ọzọ.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/mutuelle-sante-que-prend-t-elle-en-charge/
Francis Bebey, nlọghachi dị egwu nke oke ọgụgụ isi - Jeune Afrique
Pourquoi il ne faut pas nettoyer le four avec du vinaigre et du bicarbonate de soude…